Sompanga discontinues drills lalana, sy ny tsangam-bato efitrano misakana orinasa mpamokatra entana - Sina Tianjin Longtop harena ankibon'ny tany
Nilaza ilay orinasa fa trandrahana safidy stratejika no mamela azy io hifantoka amin'ny vokatra ireo amin'ny fitomboana lehibe indrindra mety. Sompanga koa fa ny orinasa sy ny mpivarotra ny voady nifanaovanareo efa misy mpanjifa sy hanohana ireo efitrano sy ny tsangam-bato sy ny lalana fandavahana fleets amin'izao fotoana izao amin'ny hetsika.
Denise Johnson, vondrona filoha ny fikarakarantsika ny loharanon-karena orinasa, dia nilaza hoe: "Ireo hetsika, izay mampifanaraka amin'ny sompanga ny tapaka rafitra, dia hanome fahafahana antsika mba hifantoka loharanon-karena amin'ireo faritra ny raharaham-barotra izay manome ny avo indrindra, maharitra fivoarana sy ny tsara indrindra maharitra miverina. "
Ny efitrano sy ny tsangam-bato ambanin'ny tany ny fitrandrahana ny vokatra eo ambany stratejika ahitana famerenana mitohy mpitrandraka, feeder onja, arintany haulage rafitra, highwall mpitrandraka, tafo bolters, jiro solika fiara sy ny fiara. Raha mbola eo ambany famerenana, sompanga dia maka vaovao intsony baiko.
Na izany aza famokarana ny lalana drills dia nitohy intsony, ary tsy misy vaovao dia halaina baiko.
Johnson naneho hevitra hoe: "sompanga mbola manolo any amin'ny iray vokatra be dia be harena ankibon'ny tany ny portfolio. Mino mafy isika dia tsara tarehy fitrandrahana maharitra orinasa, ary mbola vola amin'ny malalaka vokatra isan-karazany, na ambony sy ambanin'ny tany. Izahay mikendry ny fampiasam-bola ao anatin'ny portfolio-ny harena ankibon'ny tany vokatra mba hifantoka amin'ireo faritra ireo amin'ny ambony indrindra mety profitability. Mandritra izany fotoana izany, manohy ny fitantanana ny alalan 'ny lava indrindra any-bisikileta teo amin'ny tantarantsika. Fantatsika izany rafitra mitohy ny fihetsika tsy mora eo amin'ny mpiasa; Feno fankasitrahana aho noho ny ekipa ny fanoloran-tena tsy tapaka. "
Miaraka amin'ny fanambarana, sompanga manantena ny hitondra asa mba hampihenana ny mpiasa tany Houston, any Pennsylvanie, Etazonia, izay misy ilay efitrano sy ny tsangam-bato ireo vokatra vokarina. Raha ny orinasa mikasa ny hivarotra ny efitra sy ny tsangam-bato vokatra, dia hanombana safidy hafa koa, anisan'izany ny mety ho fanakatonana ny toerana Houston.
Nilaza ilay orinasa fa mpiasa tanteraka fihenan'ny hatramin'ny 155 toerana mifandray amin'ny efitrano sy ny tsangam-bato raharaham-barotra no andrasana, ny sasany mitranga avy hatrany. Ary koa fa ireo fihetsika ho akaiky kokoa ny mampifanaraka ny asa amin'ny ambaratonga farany-tsena amin'izao fotoana izao fangatahana.
Ao Denison, Texas, izay lalana drills no vokarina, eo ho eo 40 toerana intsony ho vokatry ny fandavahana ny lalana fivoahana sy ny toerana hafa ny rafitra.
Ankoatra ireo hetsika, sompanga dia repurpose ny Winston-Salem, North Carolina, toerana, transitioning izany avy amin'ny fitrandrahana ny lalamby toerana taty aoriana manomboka amin'ity taona ity. Asa dia hifindra ho any Fandrosoana dalamby, izay tanteraka tamin'ny tompony sompanga-tsampany.
Ho vokany, ny orinasa dia toeram-orinasa mpamokatra entana ny singa sasantsasany ampiasaina amin'ny fitrandrahana lehibe kamiao avy amin'ny toerana in Winston-Salem ho any amin'ny toerana efa misy ao Decatur, Illinois.
Sompanga koa mikasa ny hamorona nisara-kevitra mifantoka amin'ny fampandrosoana fikarohana, vokatra fampandrosoana sy ny fahaiza-manao zava-baovao. Ny orinasa iray dia hanangana ny fikarohana, ny teknolojia sy ny vokatra fampandrosoana fizarana hamonjy vokatra faran'izay tsara sy ny rafitra fahasamihafana fampidirana. Io fandaminana fiovana dia mahomby amin'ny 1 Septambra.